जोएनेपाल | यस्तो छ बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्याको सुन्दरताको राज !
यस्तो छ बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्याको सुन्दरताको राज !
जोएनेपाल २०७७ माघ ७ गते बुधबार, ०७:०२ AM
मिस वर्ल्डको ताज जितेकी ऐश्वर्या राय बच्नन उमेरले ४६ वर्ष नाघे पनि अझै उस्तै सुन्दर छिन् ।
उनको मुहारको चमक देख्दा उनी युवती जस्तै देखिन्छिन । कसैले भन्दैन उनी ४६ वर्ष कटिन । उनी आफ्नो सुन्दरतामा निखार ल्याउन कसरी गर्छिन् 'स्किन केयर' ? केही टिप्स यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ -
ऐश्वर्यालाई मनपर्ने ब्यूटी प्याक
यो कुरामा कुनै शंका छैन की ऐश्वर्या धेरै ब्यूटी ब्राण्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छिन् । कयौँ महङ्गो ब्यूटी प्रोडक्टको इभेन्ट र सूटमा प्रयोग पनि गर्छिन् । तर जब कुरा स्किन केयरको आउँछ त्यसमा ऐश्वर्या ठेट भारतिय महिलाहरुको जस्तै किचनमा देसी प्याक बनाएर प्रयोग गर्छिन् ।
यसरी बनाउँछिन् प्याक
ऐश्वर्या आफ्नो छालाको हेरचाहको लागी बेसन, दूध र बेसार मिसाएर फेस प्याक तयार पार्छिन् । यस्तो प्याक उनी एक दिन बिराएर प्रयोग गर्छिन् । छालालाई पूरा पोषण प्राप्त होस् भनेर ऐश्वर्या एक दिनको फरकमा दहीको मास्क पनि लगाउँछिन् । अर्थात् एकदिन दही र एकदिन दूध बेसनको प्याक ।
काँक्राको मास्क मन पराउँछिन्
छालाको थकानबाट टाढा रहन र प्रदूषणको असरबाट बच्न ऐश्वर्या ताजा काँक्राको मास्क अनुहारमा लगाउँछिन् । ऐश्वर्या भन्छिन् छालामा आउँने समस्याबाट बच्न दिनमा दुई पटक मुख धुनुपर्छ ।
नियमित फेसवास, मेकअपको थोरै प्रयोग र समय–समयमा छालामा मोइस्चराइज गर्नु नै ऐश्वर्याको चम्किलो छालाको राज हो । ऐश्वर्या भन्छिन्,‘आफ्नो छालाको हेरचाहको लागि म जुन ब्यूटी रेजीम अपनाउँछु त्यसमा धेरै प्राकृतिक कुराहरु समावेश गरिएको हुन्छ ।’
स्वस्थ छालाको लागि
ऐश्वर्या आफ्नो छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि बाहिरी हेरचाहमा मात्र निर्भर रहदिनन् । मानिस भित्री रुपमा स्वस्थ भएमा मात्र छाला स्वस्थ रहने धारणा राख्छिन् ऐश्वर्या । त्यसैले राम्रो र पोषक तत्वले भरिएको खाना खानु जरुरी हुन्छ । उनी खाना खाँदा ध्यानमा राख्छिन् की यो खानाले उनको शरिरमा भिटामिन र पोषण प्राप्त हुनुपर्छ ।
यस्तो कुरामा ऐश्वर्या सम्झौता गर्दिनन्
ऐश्वर्या यो मान्छिन् छालालाई चम्किलो र प्राकृतिक सुन्दर बनाउँन धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढै रहनुपर्छ । घरमा नै बनाएको खाना ऐश्वर्यालाई मनपर्छ । साथै उनी धेरै भन्दा धेरै पानी पिउँने सल्लाह दिन्छिन् । पानीले शरिरबाट टक्सिन्स बाहिर निकाल्छ । ऐश्वर्या साधारण र प्राकृतिक तरिकाले बाचेको भएर फिट र सुन्दर भएको बताउँछिन् ।
ऐश्वर्याको यो ब्यूटी रेजीम र स्किन केयर सीक्रेट्सबारे जानकारीले एउटा कुरा क्लियर हुन्छ की सुन्दर देखिनको लागि हामीले आफ्नो हेरचाह आफै गर्नुपर्छ । यो आवश्यक छैन की हामी महङगो कस्मेटिक्समा निर्भर भएर सुन्दर देखिन्छौ ।